I-Comfortable Suite B Betha Arouche 6 min ukusuka kwiMetro
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguErikson
Le ndlu ikumgangatho wokuqala inokufikelela kwi-concierge kwaye undwendwe luya kuba nokufikelela okungaphazamisekiyo kwindawo yokulala.
Indawo enethamsanqa ekubeka nje amanyathelo kude kuyo yonke into egcinwe bubomi kwiziko.
Ngaba uyafuna ukufumana ukuya kutsho kwii-R350 kuhambo lwakho lokuqala luka-Airbnb? Bhalisa apha kwikhonkco lesimemo sam: https://abnb.me/e/Zoy7hlB4fL0
Space lixhotyiswe lethuba kabini ebhedini, kumagunjana kunye zibe, idesika ukufundelwa yokubhalela, iitawuli, iimakhishithi, isepha namaphepha ezindlu zangasese, ifayibha Internet optic kunye Fi, 42 "LED TV kwigumbi lokulala, isomisi seenwele, intsimbi kunye fan letheyibhile .
Le ndlu ikwindawo esembindini, kufutshane nemizuzu emi-6 ukusuka kwiRepública/Santa Cecilia kaloliwe, imizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo sebhasi.
São Bento Monastery, Pinacoteca, Station Luz, Julio Station Prestes, Sala São Paulo, Banco ukwenza Brasil Cultural Centre, Rua 25 de Marco, Ithiyetha zikaMasipala, Market zikaMasipala, Rock Gallery, Italy Terrace, Copán Building, Isiteydiyam Pacaembú, Avenida Paulista.
U-Erikson ukunika ukuya kutsho kwi-R350 kuhambo lwakho lokuqala luka-Airbnb. Bhalisa apha kwikhonkco lesimemo sam: https://abnb.me/e/Zoy7hlB4fL0
Umbuki zindwendwe ngu- Erikson
Ndiyayithanda iSão Paulo kwaye ndingathanda ukwabelana nawe ngeengcebiso zokuthenga kwindawo ezingqongileyo kunye ne-25 de Março, Brás, Jose Paulino kunye nendlela yokonwabela isixeko.
Ndiyathanda ukwamkela iindwendwe, nto leyo eququzelela ukuhlalisana kwaye ukuba ndiceliwe ndingakunika iingcebiso malunga nokhenketho, ukuthenga kunye neendawo njengoko ndikwindawo eyongezelelweyo.
Ndiyayithanda iSão Paulo kwaye ndingathanda ukwabelana nawe ngeengcebiso zokuthenga kwindawo ezingqongileyo kunye ne-25 de Março, Brás, Jose Paulino kunye nendlela yokonwabela isix…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Cecilia